I-Wii U Virtual Console iphehlelela neMidlalo yeClassic yeesenti ezingama-30 - Inkcubeko Yopopu
I-Wii U Virtual Console iphehlelela neMidlalo yeClassic yeesenti ezingama-30
Phakathi kwezinye izinto ezininzi ezabhengezwa ngexesha lokusasazwa kweendaba ngqo zikaNintendo ngale ntsasa, inkampani yabhengeza ukuba i-Wii U's Virtual Console-iqonga le-eShop elikuvumela ukuba ukhuphele kwaye udlale imidlalo yakudala evela kwiinkqubo zeNintendo zangaphambili- uzokumisela ngokusesikweni lo nyaka.
Okwangoku, kukho umdlalo omnye okhoyo: Ukulwa kweBhaluni , ukuphosa i-NES okuphezulu kwe-30 kuphela. Inxalenye yesikhumbuzo seminyaka engama-30 yeNintendo's NES, kunye I-F-Zero, iPunchout!, Ukhenketho lweKirby, iSuper Metroid, uYoshi, kwaye Idon Kong , eya kufumaneka nge-30 nganye, inye ngenyanga, kude kube nguJulayi. Uya kuba nenyanga kuphela ukufumana nganye ngexabiso eliphantsi, nangona kunjalo, njengoko beya kubuyela kumaxabiso abo aqhelekileyo emva kweentsuku ezingama-30.
uyenza njani imarzipan ukusuka ekuqaleni
Ikhonsoli ebonakalayo iya kuphehlelela ngokupheleleyo kwiinyanga ezizayo, ngohlaziyo lwesibini olucwangciselwe ihlobo ukunceda ukuphucula isantya se-UI yekhonsoli ngokubanzi. Kodwa i-Wii U Virtual Console ayizukubandakanya yonke imidlalo ekhoyo kwi-Wii's Virtual Console, kuba iphinda ibhalwe ngokutsha kwinkqubo entsha, ngenkxaso ye-GamePad, ulawulo olwenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo kunye nokusindisa okufana nokonga. Yile nto siyifundayo, ubuncinci.
Uyenza njani icing emnandi yekhekhe
Xa iphehlelela ngokupheleleyo, imidlalo ye-Virtual Console yeNES iya kuba yi- $ 5 ukuya kwi- $ 6, ngelixa imidlalo ye-SNES iya kuba yi- $ 8 ukuya kwi- $ 9. Ukuba sele ungumnini womdlalo kwi-Wii's VC uya kuba nakho ukuyikhuphela ngentlawulo ye- $ 1 ukuya kwi- $ 1.50.
[ nge Ukonwaba , Ukonwaba , Ukonwaba ]
UNeal Brennan Uthetha malunga nokuwa kwakhe noDave Chappelle
UDonald Glover-Led-Mnu noNksk.
Inkosi yeAmazons yeRings Series ifumana iNkulumbuso yoMhla
Bukela iNtshatsheli yeTreyila eNtsha yokuKhawuleza kunye noMsindo
U-Khloé Kardashian Uphendula abantu ababhekise ku-O.J. USimpson njengoTata wakhe kwi-Instagram
Uyenza njani i-gummy bears
ilamuni yekhekhe kunye ne-raspberry filling
uyandibulala undibulala nyani
chris brown kunye nekarrueche tran iindaba
UBenjamin Keough, uNyana kaLisa Marie Presley, osweleke eneminyaka engama-27
UBenjamin Keough, unyana kaLisa Marie Presley, umntakwabo umdlali weqonga uRiley Keough, kunye nomzukulwana kaElvis, usweleke ekubulaweni okubonakalayo. Wayeneminyaka engama-27.
I-Apple yokugcwalisa iresiphi
Unamaapile? Yenza ibhetshi enkulu yokugcwalisa iapile kwaye uyisebenzisele zonke izinto! Ipayi yeapile, ikeyiki yeapile kunye needyuli. Umkhenkce okanye unokonwaba unyaka wonke!
Inyaniso Ebukhali: Kutheni abantu basetyhini bebuyela kumadoda abawahlukumeza
Otshatileyo kwi-blogger ye-Mob uzama ukuqonda ezi meko zingathandekiyo.
© Copyright ©. Onke Amalungelo Agciniwe.